HERINANDRON’NY FAMPINONOAN-DRENY : Tontosaina ao Miarinarivo ny fankalazana ofisialy
Sarobidy loatra amin’ny fahasalaman’ny zaza ateraka ny nonon-dreny, izany indrindra no antony anomezan’ny mpitsabo toro- hevitra sy tosika ireo renim-pianakaviana mitaiza kely amin’ny alalan’ireo karazan-tsakafo be vitamina, mitondra hery sy tanjaka ho an’ny fahasalamana. 21 août 2019
Toy ny fanao isan-taona dia nanomboka ny alatsinainy 19 aogositra hatramin’ny zoma 24 aogositra 2019 ho avy ny fankalazana ny herinandrom-pirenena ho an’ny fampinonoan-dreny. Faritra maro no handray anjara amin’izany raha toa ka ny kaominina Miarinarivo Itasy kosa no handray ny fankalazana ofisialy anio alarobia 21 aogositra.
Ny lohahevitra voizina mandritra ny fankalazana ny hoe : « Ray aman-dreny mandray andraikitra, fampinonoan-dreny lavorary ». Marihin’ireo mpitsabo hatrany moa fa sakafo tsara ho an’ny zazakely ny nonon-dreny. Tsara kalitao izy io satria mitondra anzima, proteina sy otrikaina maro hafa...
Natoraly sy ara-pahasalamana kokoa rahateo, raha mitaha amin’ny solon-drononon-dreny omena amin’ irony « biberon » irony. Ampirisihana havitrika hatrany araka izany ny renim-pianakaviana satria ny zazakely minono ny nonon-dreny dia manana hery fiarovana ambony kokoa. Vokatr’izay dia voaaro amin’ireo aretina toy ny tohina, ny olana amin’ny tsinay, manadio ireo fery, manadio maso ny nonon-dreny. Ankoatra ireo voalaza ireo dia tsy azo lavina fa manamafy ny fifandraisan’ny reny sy ny zanany ny fampinonoana : ampy fitiavana kokoa ny zazakely ninono tamin-dreniny, noho ireo zatra nomena « biberon ».